Aung San Suu Kyi – Myanma Daily
posted on May 19, 2017 at 8:36 pm UTC+8 File: Aung San Suu Kyi, Myanmar, Myanmar State Counsellor
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာမေးနီးယားခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး Very Rev. Fr. Zaven Sargis Yazichyan အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာ၊ စင်ကာပူနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဆိုင်ရာ … [Read more...] about နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာမေးနီးယားခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး Very Rev. Fr. Zaven Sargis Yazichyan အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတက်ဖို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို ဖိတ်ကြား
posted on May 16, 2017 at 7:11 pm UTC+8 File: Aung San Suu Kyi, Myanmar, VOA
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတက်ဖို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို ဖိတ်ကြား မေလ ၂၄ ရက်နေ့ ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံ ဒုတိယစည်းဝေးပွဲကို ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်တက်ရောက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။ ရေလမ်း ကုန်းလမ်းပါဝင်တဲ့ ခေတ်သစ်ပိုးလမ်းကြီးစီမံကိန်းအတွက် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး … [Read more...] about ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတက်ဖို့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကို ဖိတ်ကြား